Ufuyo Lweenyosi eMzantsi Afrika
Eyona nto ibalulekileyo ezakudingwa ngabagcini nyosi base Mzantsi Afrika lulwazi. Uzakudinga ukwazi indlela ethile yokuphatha iinyosi, ubume betsili, imisebenzi yeenyosi, umzimba wenyosi, ukutya ezikuthandayo kunye nendlela ezitya ngayo. Kufuneka wazi nezifo kunye nezilwanyana ezinokuhlasela iinyosi zakho. Abagcini-nyosi abasakhasayo bazakudinga ibubu lenyosi (okanye ikoloni yeenyosi), iindawo yokugcina iinyosi/itsili kunye nendawo yokubeka elitsili.
Lendawo ke kufuneka ibekufutshane nendawo enokutya kweenyosi. Ukutya okwaneleyo kunye namanzi kuzakuvelisa ubusi obuninzi obusemgangathweni. Impahla ekhuselekileyo kunye nezixhobo ezimbalwa zokusebenza ngeenyosi nazo zizakudingeka.
Iimveliso Ezenziwe Ngeenyosi Ezisetyenziswi Njengamayeza
I-Apitherapy kukusetyenziswa kwemveliso ezenziwe ngobusi-benyosi ukuthintela nokunyanga izifo. Ngokwe American Apitherapy Society, ezi mveliso zenyosi ziquka ubusi, ipollen, propolis royal jelly kunye nencidi yeenyosi - bee venom....more
Amatsili Abagcini-Nyosi Abasakhasayo
Amafama asakhasayo adinga itsilixa eqala ishishini lokugcina iinyosi. Itsilikulapho iinyosi zizakuhlala khona, zikhulise amantshontsho eenyosi, zigcine ikumkanikazi yazo ebeka amaqanda ikhuselekile....more
Iprofayili yabafuyi beenyosi eMzantsi Afrika ayohlukanga kakhulu kunamanye amazwe. Isiqingatha esingange pesenti yesihlanu sabafuyi beenyosi eMzantsi Afrika bangabanikazi bomhlaba abagcine kuwo iinyosi....more
Iinyosi kunye ne Pollination
Iinyosi ‘zidume’ ngobusi bazo (kunye nezinye izinto) ezizivelisayo, kodwa kuya kukhula nolwazi ngomsebenzi obalulekileyo owenziwa ziinyosi wokuthi zandise izityalo (pollination)....more
Iinyosi kunye neeMfuneko zePollination kwiZityalo
Ngaphandle kokubhalisa amatsili abo, kukho iimfuneko ezithile ekufuneka abagcini-nyosi bahambisane nazo ukuze bakwazi ukunikeza ngeenkonzo ze pollination kwizityalo zokutya....more
Iinyosi zobusi zizinambuzane ezihlala ngokwamaqela/iikoloni ezininzi.Ikoloni nganye ibane mazi ekwaziyo ukuzala (ikumkanikazi) kunye namawaka waka eenyosi ezisebenzayo (iimazi ezingakwaziyo ukuzala)....more
Iingxaki kunye Namathuba Okukhulisa iInyosi
Eyona ngxaki inkulu e- Mzantsi Afrika ekhokhelela kwesisithuba kukunqongophala kwezinto zokuvelisa incindi. E Mzantsi Afrika, ngu – 15% kuphela oveliswayo wobusi oluphuma kwizityalo zemvelo ngokuthelekisa no – 70% wase Ausralia....more
iPollen ngumgubo oveliswa zintyatyambo ezivelisa imbewu. Inamagaqa amancinci we pollen kwaye anenzala yezityalo (male gametes)....more
Uqala Njani Ukugcina iiNyosi
Ukugcina iinyosi kunga mnandi kakhulu kwaye ibeyindlela yokuzonwabisa ngaphandle, kodwa oku kungakhula ibengumsebenzi opheleleyo weshishini lokuthengisa....more
Izonakalisi kunye neZifo zeeNyosi
Ukuba nolwazi mayelana nezonakalisi kunye nezifo zeenyosi kubalulekile, ukuqinisekisa ukuba ibubu lakho lisempilweni kunye nayo yonke imveliso edibene nenyosi phakathi....more
Ukondliwa kweeNyosi Zobusi
Inyosi zobusi zidinga ukutya ukuze ziphile kwaye zizale. Ziidinga nee carbohydrate (iswekile efumaneka kwincindi okanye ubusi), amino asidi (proteni esuka kwi pollen), lipids (iifatty asidi, sterols), iivitamin, minerali...more
Izinto zokusasaza imbewu yezityalo, ngokwesiqhelo, zizisa inzuzo eyahluka-hlukeneyo ebantwini. Impilo yethu ixhomekeke kakhulu kwiintlobo-ntlobo zeenkqubo zendalo kunye nimisebenzi yazo....more
Ngaphandle kokuba nesondlo nokunikeza Amandla, ubusi baziwa kwakudala okuba bulwa neentsholongwane kunye neentsholongwane ezosulelayo....more
Iinyosi zobusi zidinga amanzi ngenjongo ezimbini eziphambili. Oko kuqala, amanzi asetyenziswa ukungxenga ubusi obu crystallised ukuze bugalelwe ekutyeni kwamantshontsho. Okwesibini, iinyosi zobusi zidinga amanzi ukupholisa iindawo ezihlala kuyo (hive)....more
Ndidinga Ntoni Ukuze Ndiqale Ukugcina Iinyosi?
Eyona nto ibalulekileyo ezakudingwa ngabagcini nyosi base Mzantsi Afrika lulwazi. Uzakudinga ukwazi indlela ethile yokuphatha iinyosi, ubume betsili, imisebenzi yeenyosi, umzimba wenyosi, ukutya ezikuthandayo kunye nendlela ezitya ngayo....more